के गर्दा हुन्छ उद्योग सञ्चालन अनुमति रद्द ? « Salleri Khabar
के गर्दा हुन्छ उद्योग सञ्चालन अनुमति रद्द ?
२९ बैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक – न्यूनतम स्वास्थ्य–सुरक्षा मापदण्ड नअपनाइए त्यस्ता उद्योगको सञ्चालन अनुमति तत्काल रद्द गरिने भएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाइँ खतिवडाको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिसमेत गठन गरेको केन्द्रले जनाएको छ । समितिले उद्योगका कामदारको आवास व्यवस्थापन तथा उद्योगमा स्वास्थ्य–सुरक्षाबारे अनुगमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले बताए । उनले भने “समितिलाई अगुगमनका क्रममा उद्योगमा न्यूनतम स्वास्थ्य–सुरक्षा अवलम्बन नगरेको देखिए तत्काल सञ्चालन अनुमति रद्द गरिने अधिकार दिइएको छ ।” उनका अनुसार लकडाउन खुकुलो बनाएपछि जिल्लामा उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा आउने भएकाले अनुगमन समिति बनाइएको हो ।